Sepoi Sepoi - Amapomakazi Yeyokuqeshisa e- Tanjung, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Ukuhlala tofo-tofo e- Tanjung, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Iindwendwe eziyi-12 · 6 amagumbi okulala ayi- · iibhedi eziyi-12 · Amagumbi okuhlambela ayi-6
Lo mbuki zindwendwe uzibophelele kwinkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 yakwa-Airbnb. Funda okungakumbi
Ukuba urhoxisa ukuyotsho kwi-Iintsuku eziyi-95ngaphambi kokungena, uza kubuyiselwa i-50%, ngaphandle kwemali yenkonzo.
Umbuki zindwendwe akazivumeli izilwanyana zasekhaya okanye ukutshaya. Fumana iinkcukacha
Ukwamkelwa kweendwendwe ngu-
Amakhaya kanokutsho anento yonke ekwelona nqanaba liphezulu
Indlu esemgangathweni kunye nendlu nganye eyakhiwe ngobuchule, Indlu nganye ka-Airbnb Luxe iza nezinto onokuzisebenzisa ezisemgangathweni, iinkonzo, kunye nomntu ozinikeleyo ekulungiseleleni uhambo.
Emva kokubhukisha le ndawo, umcebi wohambo angalungiselela naziphi na kwezi nkonzo zongezelelekileyo.
Ukusiwa kwisikhululo seenqwelo-moya
Umntu ogade ivenkile yokutyela
Isixhobo sokubeka iPod
Umatshini wokudlala ii-DVD
Umahluko we-Airbnb Luxe
Ukuceba uhambo ukusuka ekuqaleni ukuya kutsho ekugqibeleni
Abacebi bohambo balungelelanisa ukufika kwakho, ukuhamba kwakho nayo yonke enye into.
Ukuhlolwa okunamanqaku ayi-300 nangaphezulu
Zonke izindlu ezikwi-Airbnb Luxe kuyaqinisekiswa ukuba zikwimeko entle.
Uyakhathalelwa xa uhambile, emini nasebusuku
Ukufumana uncedo oluphezulu xa uludinga ngayo nayiphi na imibuzo onayo, nangaliphi na ixesha.
Ixesha lokungena lingo: Emva ko 15:00